Dowlada Kenya Oo Dhaliil U Jeedisay Maxkamada Cadaalada Aduunka – Great Banaadir
Dowlada Kenya ayaa ku eedeysay Maxkamada Caalamiga ah ee Cadaalada ee ICJ, Nidaam ay ku sheegtay mid Cadaalad Darro ah oo la xiriirta Dhageysiga Dacwada Badda ee kala dhexeeya Dalka Soomaaliya, iyadoo kenya ay Diiday in ay ka qeyb qaadato Dhageysiga Dooda Labada Wadan u dhexeysa.
Dhageysiga oo bilowday maalintii Isniinta ilaa maalintii Khamiista ee todobaadkaan, ayaa loo ogolaaday Qareenada ka socda Dalka Soomaaliya in ay gudbiyaan Cabashadooda la xiriirta Sheegashada Kenya ee Badda Soomaaliya.
Xukuumada Nairobi ayaa Jimcaha maanta ah sheegtay in ay dalbaneyso in gabi ahaanba la hakiyo Dacwada maadama aysan kalsooni badan ku qabin Garsoorayaasha.
Wasaarada Arimaha Dibada Kenya ayaa qeexday in aysan shaki ka qabin in ay leedahay halka ay ku doodeyso balse cabsida weyn ay tahay in aysan ku kalsooneyn qaabka ay wax u wado Maxkamada Cadaalada.
Warqad Wasaarada Arimaha Dibada Kenya ay horay ugu qortay Diiwaan Hayaha Maxkamada ICJ, ayaa waxay ku dalbatay in dooda la xiriirta Dacwadaan, laga saaro Garsooraha lagu magacaabo Cabdiqawi Yuusuf.
Marka laga tago Marmarsiiyaha Kenya ee ku aadan Muwaadinkaan Soomaaliyeed, ayaa hadane Xeeldheerayaasha iyo Aqoonyahanada u dhashay dalkaasi waxay qabaan rajo xumo baahsan oo ah in Kenya aysan Heysanin Cadeymo la xiriira Sheegashada Badda Soomaaliya.